Mgbanwe nke onye ahia | Martech Zone
Mgbanwe nke onye na-ere ahịa
Mọnde, Jenụwarị 7, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Site na ọganihu ọ bụla na ahịa, obi abụọ adịghị ya na ahịa aghaghị ịzaghachi ma gbanwee na mgbanwe nke nchọpụta ndị mmadụ na ịzụta omume. Malite na 1800s, ihe omuma a sitere na Ọzụzụ Caskey na-akọwapụta akụnụba ugbu a, ụzọ ndị na-ere ahịa, omume ndị ahịa, atụmatụ, na mmeghachi omume.
Kedu ka anyị si bịa ebe a? Ihe omuma nke di n’okpuru na-enye gi ihe omuma banyere otu anyi si ahu uwa nke ndi okacha amara ire ahia taa ma nyere gi aka icheghari oru gi dika onye ahia. Iji chọpụta isiokwu a n'ihu, gee ntị na pọdkastị a ma ọ bụ lee ihe onyonyo a.
Tags: Ọzụzụ Caskeymmalite nke onye na-ere ahiaakụkọ banyere ahịaAhịa PodcastNkwado ire ahịaọzụzụ ahịaonye na-ere ahia
Kedu Email Na-ejikọ Marketing Multi-Channel